Fahaizana kalitika: mamantatra ireo Anions sy Cation
Famaritana ny anarana sy ny niaviany
Glossary ny fepetra fototra
Fivavahana & Spirituality
Fiaviana & Fampandrosoana
Ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny
Mpanao heloka bevava fanta-daza
Fahaizana kalitika ao amin'ny Chemistry
Ny fanadihadiana kalitika dia ampiasaina mba hamantarana sy hanasarahana ny cation sy ny anion ao anaty singa samihafa. Raha oharina amin'ny fandalinana marimaritra iraisana , izay mikendry ny hamaritra ny habetsaky ny habeny na ny halavany, ny fanadihadiana kalitao dia endrika fanadihadiana. Ao amin'ny toeram-pampianarana iray dia ny 0,25 M ao anatin'ny vahaolana amin'ny rano dia mifantoka amin'ny fisorohana ny ion. Ny halavan'ny 'semimicro' amin'ny fandalinana kalitao dia mamaritra fomba amam-panao hahitana 1-2 mg of ion ao amin'ny vahaolana 5 ml.
Na dia misy fomba fanadihadiana kalitao ampiasaina hamantarana ny molekiolana covalente aza, ny ankamaroan'ny fitambarana kovalanina dia azo zaraina sy mifampiankina amin'ny fampiasana ny toetra ara-batana, toy ny sakana amin'ny refraction sy ny teboka.
Fanazaran-tena momba ny kalitaon'ny semi-micro
Mora ny manimba ny ohatra amin'ny alàlan'ny teknolojia mahantra, ka zava-dehibe ny manaraka ny fitsipika sasany:
Aza mampiasa rano fisotro. Mampiasà rano volo na rano maloto.
Ny lamba famaohana dia tokony hadio alohan'ny fampiasana azy. Tsy voatery ho maina izany.
Aza apetraka eo amin'ny vavan'ny fanandramana fitsapana. Manaova fanafody avy eo amin'ny molotra fitsaboana amin'ny alàlan'ny fanandramana mba tsy ho voaloto.
Kitiho ny vahaolana amin'ny alalan'ny fandosirana ny fantsona. Aza afangaroy amin'ny rantsan-tànana ny fantson-tselatra ary atsofohy ny tavoahangy, Aza avela hipetra-potsiny ianao.
Dingana famaritana kalitao
Raha aseho ho toy ny solila (sira) ilay santionany, dia zava-dehibe ny manamarika ny endrika sy loko ny kristaly rehetra.
Ny Reagan dia ampiasaina mba hanasarahana ireo cations amin'ny vondrona mifandray aminy.
Ny Iona ao amin'ny vondrona dia misaraka. Taorian'ny dingana isaky ny fisarahana, dia natao ny fanandramana mba hanamafisana ireo iiona sasany tena nesorina. Ny test dia tsy natao tamin'ny dingana voalohany!
Ny fizarana dia miankina amin'ny toetran'ny iôs. Ireo dia mety mitarika fanehoan-kevitra miverimberina amin'ny fanovana ny fitondram-pamokarana, ny loto samy hafa amin'ny asidra, ny fototra na ny rano, na ny fivoahana ny liona sasany.
Sample Qualitative Analysis Protocol
Voalohany, nesorina tao anaty vondrona ny liona avy amin'ilay vahaolana voalohany. Rehefa tapisaka ny vondrona tsirairay, dia ny fitsapana dia atao ho an'ny ion tsirairay ao amin'ny vondrona tsirairay. Ireto misy vondrona iombonana:
Vondrona I: Ag + , Hg 2 2+ , Pb 2+
Voasambotra tamin'ny 1 M HCl
Vondrona II: Bi 3+ , Cd 2+ , Cu 2+ , Hg 2+ , (Pb 2+ ), Sb 3+ ary Sb 5+ , Sn 2+ ary Sn 4+
Voavina amin'ny vahaolana 0.1 MH 2 S amin'ny pH 0,5
Vondrona III: Al 3+ , (Cd 2+ ), Co 2+ , Cr 3+ , Fe 2+ ary Fe 3+ , Mn 2+ , Ni 2+ , Zn 2+
Voavina amin'ny vahaolana 0.1 MH 2 S amin'ny pH 9
Vondrona IV: Ba 2+ , Ca 2+ , K + , Mg 2+ , Na + , NH 4 +
Ba 2+ , Ca 2+ ary Mg 2+ dia voadona ao amin'ny 0.2 M (NH 4 ) 2 CO 3 ny vahaolana amin'ny pH 10; Ny liona hafa dia tsy mety
Reagents maro no ampiasaina amin'ny fandalinana kalitao, saingy vitsy monja no mandray anjara amin'ny fizotry ny vondrona rehetra. Ny valan-drà efatra ampiasain'ny ankamaroany dia 6M HCl, 6M HNO 3 , 6M NaOH, 6M NH 3 . Ny fanatrarana ny fampiasana ny mpanangona dia manampy amin'ny fanomanana ny fanadihadiana.
Fomba fitantanana kalitao mahazatra
6M HCl Mitombo [H + ]
Mitombo [Cl - ]
Mihena ny [OH - ]
Manimba karôtôma tsy misy fotony, chromates, hydroxides, sulfata sasantsasany
Manimba ny hydroxo sy ny NH 3 complexes
Manolo ireo chlorides tsy misy fotony
6M HNO 3 Mitombo [H + ]
Mamolavola karazam-barivarena, chromates, ary hydroxides
Manala solifoly tsy voapentimpentina amin'ny alalan'ny fanamafisana ny ion-sulfida
Mamotika ireo toeram-ponenana hydroxo sy ammonia
Good oxidizing agent rehefa mafana
6 NaOH Mitombo [OH - ]
Miverina [H + ]
Famoronana toeram-ponenana hydroxo
Manosotra hydroxides tsy misy fotony
6M N 3 Mitombo [NH 3 ]
Mitombo [OH - ]
Ny endrika NH 3 complexes
Mamolavola buffer fototra miaraka amin'ny NH 4 +
Ipso, Meso, ary Peri Fanovana ao amin'ny Chemistry Organic
Hetsika Hassium - Hs na Element 108
Ny môtera sy ny polymer chemistry
Organized Chemistry Tips
Inona no atao hoe toaka na etana?
Manaova Modely Atao
Structures chimiques manomboka amin'ny taratasy G
7 Molekiolinina Tsy Azonao Atao Mihitsy
Momba ny rafitra Skeletal
E - Vondrona organika
Ahoana ny fomba hanonona anarana hoe Chansy Alkane tsotra
Nahoana no tsy Kristianina jiosy?
10 Fomba mahavariana momba ny Lalitra ao an-trano
Biby sy natiora
Hazo Akupresure: Yong Quan - Gushing / Bubbling Spring
Parts of a Surfboard
Periodes de l'Era Paleozoy
Tyrannosaurus Rex - mpihaza na mpangalatra?
Ny Diaben'ny Fahafatesana Bataan
Top 5 Tendrombohitra Skanho Atsinanana any atsinanana
Pirinty avy amin'ny Delphi - Print PDF, DOC, XLS, HTML, RTF, DOCX, TXT
Manendreha fanadihadiana amin'ny alalan'ny fampiasana Google Docs
Ho an'ny mpampianatra
Homer Simpson mipetraka amin'ny ala
Asehoy ny toerana misy ny fiantohana ara-tsosialy
Fitsipika momba ny hatsikana ao amin'ny Heian Japon, 794 - 1185 am.fi
Famaritana gramatika diso sy ohatra
Ny Modely Dobzhansky-Muller
Fomba hanesorana ny sainao
Lalao Olaimpika - Lalao, Fomban-tany ary Ady
Ahoana no hamoronana tontolo iainana tsy dia mampatahotra loatra
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Caroline Avaratra
Mianara ny tonon'ny "La Fleur Que Tu M'avais Jetee" avy amin'ny "Carmen"
Palenque Aqueduct Systems - Fitantanana ny rano ao amin'ny Maya
Inona no azon'ireo mpianatra miala sasatra na mipetraka atsy ho atsy?
Instant Slushy How-To
Alemà ho an'ny mpandahateny - Haus und Hof - Trano sy trano
Alohan'ny hividiananao Scanner NASCAR
Ny Lalàn'i Raoult's Famaritana
Word of the Day - kurai
20 Ny Mpivady mampihetsi-po dia efa voasambotra tao amin'ny fakantsary
© 2020 mg.eferrit.com